China Mobile Concrete Batching Plant Fambolena sy Orinasa | Jusheng
Ny zavamaniry fanaovana batterie beton dia famolavolana miorina amin'ny tranofiara. Ny mpampita entana, ny mixer vita amin'ny beton, ny rafitra mandanjalanja, ny conveyor visy ary ny silo simenitra dia tafiditra ao anaty unité izay napetraka tamina tranofiara, izay rafitra iray tsy miankina. mifandray tanteraka amin'ny ozinina, izay mampihena ny fotoana fametrahana sy ny fizahan-toetra ny asa famokarana beton.
Famokarana teoria m³ / h 60
Fivoahan'ny mixer m³ 1.0
Karazan-tsakafo Fihinana fehikibo
Modely Batcher PLD1200-Ⅲ
Batcher (habetsahan'ny bin) m³ 12X2
herin'ny mixer KW 22X2
Hery manandratra KW 7.5X2
Haavo ny famoahana M 3.9
Max mavesatra & Fahamarinana aggregate kg 2500 ± 2%
Fitaovana vovoka kg 600 ± 1%
Famokarana teoria m³ / h 75
Fivoahan'ny mixer m³ 1.5
Modely Batcher PLD2400-Ⅲ
Batcher (habetsahan'ny bin) m³ 15x2
herin'ny mixer KW 30x2
Hery manandratra KW 11x2
Haavo ny famoahana M 3.8
Max mavesatra & Fahamarinana aggregate kg 3000 ± 2%
Fitaovana vovoka kg 800 ± 1%
1. Famolavolana firafitra mifangaro, mifantoka amin'ny ankamaroan'ny singa fitambarana fampifangaroana amin'ny singa fitetezana tokana;
2. Fomba fiasa maha-olona, ​​asa azo antoka sy azo antoka, fandidiana maharitra amin'ny tontolo masiaka isan-karazany;
3. Mixer vita amin'ny beton Twin-shaft (azo ampiasana ihany koa ny mixer an'ny planeta), izay afaka mihazakazaka hatrany, mifangaro, ary afangaro mafy sy haingana; afaka vita ao anatin'ny fotoana fohy izy io. Ho an'ny beton matevina, beton matevina, plastika ary zara maro amin'ny beton, azo afangaro tsara izy io.
4. Ny zavamaniry iray manontolo dia azo entina haingana any amin'ny toeram-pananganana ary atambatra eo an-toerana amin'ny alàlan'ny endrika mihantona feno;
5. Vita mialoha ny fanaterana asa mialoha ny fanaterana, ary azo tanterahina ny fanamboarana raha tsy misy ny komisiona;
6. Fifanarahana be pitsiny, haavo automatique avo lenta, fihetsiketsehana malefaka sy mety, fandidiana tsotra sy milamina.
Ny firafitry ny zavamaniry fanaovana beton vita amin'ny beton dia mizara telo: ny rafitra fanaraha-maso, ny sosona mifangaro ary ny sosona milanja.
Ny sehatry ny sosona mifangaro dia vita amin'ny firafitra vy miaraka amina vatan-kazo miovaova avo roa heny izay mavesatra kokoa ary manana fihenjanana tsara kokoa sy fitrohana ny hatairana noho ny firafitra mahazatra. Ny sosona mifangaro sy ny sosona mamoaka dia vatana henjana izay mifangaro. miaraka amin'ny fototra, izay mampihena tsara ny hovitrovitra avy amin'ny mixer mivaingana; ny tohana dia mandray tongotra mahitsizoro, izay tsy vitan'ny firafitra tsotra fotsiny, fa malalaka koa eny amin'ny habakabaka.
Ny efitrano fanaraha-maso dia voahodidin'ny varavarankely, izay mifandray amin'ny vatan'ny zavamaniry mifangaro beton, ary azo noforonina hitovy halavan'ny sosona mifangaro. Ny lampihazo mandeha amin'ny sosona mifangaro dia vita amin'ny vy makarakara, izay mety amin'ny fandinihana ara-potoana ny famokarana sy ny famoahana ny mpampiofana. Alohan'ny handaozana ny ozinina, ny rafitra fanaraha-maso dia simulate ary debugging ary ampifandraisin'ny mpampitohy fiaramanidina, izay mampihena ny asa fametrahana eo an-toerana sy ny mety tsy fahombiazana. Tsy ilaina intsony ny manafoana sy mampifandray tariby rehefa mamindra fitaovana.
Misy hoppera milanja vovoka roa (simenitra, lavenona), hoppera milanja rano iray, hoppera roa mifangaro, ary hoppera fitehirizana iray agregate izay napetraka ao anaty sosona milanja. Ny fandanjana rehetra dia mampiasa sensor avo lenta, fametrahana tsotra, fanitsiana mety ary fampiasana azo antoka. Ny fivoahan'ny vovoka mandanja hopper dia mandray valizy lolo pneumatika voafehy mandeha ho azy, fifandraisana malemy ary fanidiana tanteraka dia raisina ao amin'ny fidirana sy ny fivoahana. Ny hoppera mandanjalanja mifangaro dia apetraka ambonin'ilay hoppery fandrefesana rano, ary ny fivoahana dia mandray ny valizy baolina vy tsy misy fangarony handefasana ilay fitaovana.
Ny totaliny dia ny fatra voaangona na fandrefesana tokana ny refy elektronika. Simenitra, rano ary additives dia mandanja hopper miaraka amin'ny fandrefesana marina, ny fanaraha-maso afovoany PLC, ary ny fandidiana tsotra. Ny fangoronana dia ampitaina ary fahanana amin'ny fehikibo. Na ny fandrefesana ny agregate, ny vovoka na ny rano, ny hafainganam-pandehan'ny santionany dia mihoatra ny 120 heny isan-tsegondra, ary ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny fandrefesana dia azo antoka avy amin'ireo sensor avo lenta. Fanaraha-maso afovoany PLC, azo ampiasaina ho azy na tanana. Rehefa tsy mifehy ny famokarana mahazatra ny zavamaniry mifangaro ny solosaina indostrialy na PLC dia azo ampiasaina ihany koa ny bokotra fiasan-tanana hahatratrarana ny fiasan'ny tanana mba hisorohana ny fahatapahan'ny famokarana. Tsotra sy mora fehezina ny fandidiana. Ny fampisehoana tontonana mavitrika dia afaka mahatakatra tsara ny satan'ny fiasan'ny singa tsirairay, ary afaka mitahiry sy manonta tahirin-kevitra momba ny tatitra (fanontana an-tsoratra, quadruplicate), izay manome fahafaha-manao lehibe ho an'ny fitantanana drafitra famokarana. Izy io dia manana rafitra fanaraha-maso roa ho an'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy. Toetra famokarana.
Ny singa elektrika lehibe amin'ny mixer, masinina volo, sensor sensor, singa mifehy ny rivotra ary ny rafitra fanaraha-maso dia marika nafarana avokoa, izay tsy mampihena be loatra ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny fitaovana, fa manatsara ihany koa ny refy fandrefesana ireo fitaovana.
▶ Inona avy ireo singa ao amin'ny orinasa mampifangaro finday?
Ny chassis mixer an'ny cantilevered an'ny motera lehibe, izay misy pin traktera sy tongotra fitobiana ho an'ny kamio; ny refy fandrefesana ny mixer, ny simenitra ary ny rano, ny fifangaroana amin'ny chassis. Apetaho manodidina ny latabatra fisafoana, lalamby sns.
Efitra fanaraha-maso 2:
Ny efitrano fanaraha-maso dia eo amin'ny farany ambanin'ny chassis mixer, ary ny rafitra fifangaroan-java-maniry feno dia napetraka ao anatiny. Ny efi-trano fibaikoana dia manohana ny zavamaniry iray manontolo rehefa miasa izy. Rehefa mamindra sy mitondra, ny efitrano fanaraha-maso dia tahirizina ary tehirizina ao anaty lavaka fononteny; ny tsipika fanaraha-maso rehetra dia tsy mila esorina.
Fatra fandrefesana 3:
Ity rafitra ity dia miorina amin'ny faran'ny afovoan-toerana mifangaro mifangaro, ny tapany ambony dia ny hopper fitehirizana (fasika, vato), ny hopper fitehirizana dia azo zaraina ho 2 na 4, ary hametraka birao avo mba hampitomboana ny fahafahan'ny fitehirizana, ny pneumatic nifandimby sokafy ny fiasan'ny varavarana, refesina mitambatra ho an'ny fandrefesana fanangonam-bola maro karazana.
4 Fitaovana peripheral:
Ho an'ny conveyor silo sy ho an'ny simenitra, ireo faritra manodidina dia ampahany tsy miankina amin'ny asa na ny fitaterana, amin'izay izy ireo dia azo entina sy esorina amin'ny ankapobeny tsy misy fanaparitahana.
▶ Inona avy no tena mampiavaka ilay zavamaniry fanaovana batite beton?
Ny endri-javatra lehibe dia ny ahafahany mihetsika iray manontolo. Amin'izao fotoana izao, ny gara mifangaro amin'ny beton azo ovaina dia mizara ho karazana traction sy karazana tow, ny chassis karazana traction dia misy tetezana eo anoloana sy aoriana; ny chassis tarika ihany no manana ny axe aoriana , miaraka amin'ny tendrony aloha amin'ny tetezana amin'ny lasely traktera.
Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonana mitambatra, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Concrete Mixer Spare Parts, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy,